ကျော်ကြီးပြောမယ့် စကီတွေ ခိုက်တဲ့ ချစ်ပုံချစ်နည်း (၄)ခု | သိလိုရာမေး
နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းလေ့လာမယ် ကျော်ကြီးပြောမယ့် စကီတွေ ခိုက်တဲ့ ချစ်ပုံချစ်နည်း (၄)ခု
အိမ်ထောင်သည်တွေနဲ့ အတူနေချစ်သူရည်းစားတွေရဲ့ အချစ်ရေးတည်မြဲဖို့ဆိုတဲ့အခါမှာ ချစ်ခြင်းမေတ္တာနဲ့ ယုံကြည်မှုတွေ ခိုင်မြဲနေဖို့ ဆိုတဲ့ အခြေခံအချက်တွေအပြင် ကျော်ကြီးအနေနဲ့ နောက်တစ်ခုမြင်တာ ရှိသေးတယ်ဗျ
ဒါကတော့ လိင်မှုဘဝသာယာဖို့ ဆိုတဲ့အချက်ပဲ။ လိင်မှုကိစ္စနဲ့ ပက်သက်လာရင် တချို့ဆို အိမ်ထောင်သည်တွေဖြစ်နေကြပေမယ့် ဒီကိစ္စကို နှစ်ဦးသား ဖွင့်ဟတိုင်ပင်မှုအားနည်းကြပြီး ဆန္ဒမပြည့်ဝလို့ အတွင်းမှာ မီးတငွေ့ငွေ့လောင်နေကြတဲ့သူတွေလဲ အများကြီးပဲ။
ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာ လိင်မှုကိစ္စရယ်လို့ပြောရင် အမျိုးသားတွေထက် အမျိုးသမီးတွေက ပိုပြီး ပွင့်လင်းမှု အားနည်းသေးတယ်လို့ ပြောလို့ရတယ်။ ကိုယ်ဘာလိုချင်တယ်ဆိုတာကို ပြောဖို့ ရှက်ကြတယ်ပေါ့ဗျာ… ဒီတော့ အမျိုးသမီးတွေက ဘာလိုချင်မှန်းမသိ အမျိုးသားတွေခမျာလဲ စမ်းတဝါးဝါးနဲ့ လှုပ်ရှားကြရင်း တခါတလေမှာတော့ အလွဲလေးတွေလဲ ဖြစ်ပေါ့ဗျာ။ ဒီတော့ ချိဖထုကြီးအတွက် ခုလိုမျိုး ချစ်ဇာတ်ခင်းကြတဲ့အခါမှာ သူ့အကြိုက်မသိလို့ စမ်းတဝါးဝါးမဖြစ်ရလေအောင် မိန်းမိန်းတို့ ခိုက်တဲ့ ခုတင်ပေါ်က ချစ်ပုံချစ်နည်းလေးတွေကို ကျော်ကြီး ပြောပြပေးချင်တယ်ဗျာ…
Old but Gold ဆိုတဲ့စကားအတိုင်း ဒီလို သမားရိုးကျ လှေထိုးကြီး ရိုးရိုးဆိုတဲ့ ပုံစံက အမျိုးသမီးတွေအတွက် သက်သောင့်သက်သာအရှိဆုံး ပုံစံလို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့ဗျာ… ပုံစံအသစ်အဆန်းဆိုရင်တောင် ယောကျာ်းလေးဖက်က ကျွမ်းကျင်မှုနဲ့ မိန်းကလေးဖက်က အသားကျဖို့က လိုသေးတယ်လေ… လှေထိုးကြီးရိုးရိုးနဲ့ ချစ်ပြီး ချိဖရဲ့ လက်တွဲဖော် ခိုက်လောက်တဲ့ အတိုင်းအတာအထိ ဆွဲခေါ်သွားနိုင်ဖို့ဆိုရင် အတူနေတဲ့အခါမှာ သူနဲ့ မျက်လုံးချင်းဆုံပေးတာတို့… အနမ်းကြမ်းကြမ်းတွေ ပေးတာတို့… သူ့ခန္ဓာကိုယ်လေးကို တင်းတင်းကျပ်ကျပ်ဖက်ထားတာတို့လဲ အပိုဆောင်းလုပ်ပေးပေါ့ဗျာ…
(၂) လှေထိုးကြီး ဆန်းဆန်း
လှေထိုးကြီးရိုးရိုးကို လူတိုင်းသိပေမယ့် ဒီပုံစံကိုပဲ ခပ်ဆန်းဆန်းလေး လုပ်ကြည့်ရင်တော့ သူလေး အကြိုက်တွေ့မယ်ဆိုတာ ကျော်ကြီး အာမခံနိုင်တယ်ဗျာ… ဒီပုံစံလေးကတော့ လွယ်ပါတယ်။ ပက်လက်အနေအထားနဲ့ပဲ အမျိုးသမီးရဲ့ ဒူးနှစ်ဖက်ကို သူမ့ရဲ့ ရင်ဘတ်ပေါ်မှာ ကပ်ထားပြီး ချိဖက အပေါ်စီးကနေ ချစ်တဲ့ ပုံစံလေးပါ။ ဒီပုံစံကတော့ သူမအတွက် နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းအထိ ခံစားမှုပိုစေပြီး ချိဖက စကေးကြမ်းလေလေ သူလေး ပိုကြိုက်လေလေ ဖြစ်သွားစေမယ့် ပုံစံလေးပေါ့ဗျာ…
(၃) တမျိုးကွဲတဲ့ ဒေါ့ဂီ
ကျော်ကြီးကတော့ သာမန်ဒေါ့ဂီစတိုင်က တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ချစ်တဲ့အခါမှာ တသားတည်းဖြစ်သွားတယ်ဆိုပြီး သိပ်ပြီး ဖီးလ်လို့ မရဘူးလို့ ထင်တယ်လေ။ မိန်းမဆိုတဲ့အမျိုးက ရိုမန်တစ်ဆန်တာကို သဘောကျတတ်တယ်ဆိုတော့ကာ…. ကျော်ကြီးစဉ်းစားမိတဲ့ တမျိုးကွဲတဲ့ ဒေါ့ဂီစတိုင်ကတော့ အမျိုးသမီးက မှောက်ရက်အနေအထားကိုမှ အမျိုးသားက အပေါ်က ထပ်ပြီး ချစ်တဲ့ပုံစံမျိုးဗျ… ချိဖအနေနဲ့ သူ့ခန္ဓာကိုယ်ကို ထိန်းဖို့ ကျွမ်းကျင်မှုလဲ လိုပေမယ့် သူ့ရဲ့ ကျောကုန်းသားလေးတွေ၊ တင်ပါးလေးတွေကိုလဲ အချစ်သင်္ကေတအနေနဲ့ ထိတွေ့လို့ရတယ်ပေါ့ဗျာ..
(၄) မိန်းမ မြင်းစီး
ဒီလို အပေါ်က နေပြီး ချစ်တဲ့ပုံစံမှာ အမျိုးသမီးက အဓိက ဦးဆောင်လှုပ်ရှားရတဲ့အတွက် သူ့အတွက် ပုံမှန်ပုံစံတွေထက်စာရင် ထူးထူးခြားခြားလဲ ဖြစ်မယ်… အထွတ်အထိတ်ရောက်ဖို့လဲ ပိုပြီးတော့ကို Support လုပ်ပေးနိုင်တယ်လို့ ကျော်ကြီးထင်တယ်လေ။ ဒီတော့ ချိဖအနေနဲ့ သူလေးကို ဦးဆောင်ချင်လာအောင် ဆွဲဆောင်ရမှာပေါ့ဗျာ… အိပ်ရာပေါ်ရောက်ပြီဆိုတာနဲ့ ချိဖက သူလေး စိတ်ကြွသထက် ကြွလာအောင် ကနဦးနှိုးဆွမှုတွေ၊ အနမ်းတွေ၊ အထိအတွေ့အယုအယတွေ ပေးဖို့လိုရင်လဲ ပေးရမှာပေါ့…
ကဲ စကီတွေခိုက်လောက်မယ့် ပုံစံ (၄)ခု ကိုတော့ကျော်ကြီးပြောပြီးပြီ… ချစ်ကြတာတော့ ဟုတ်ပါပြီ… ကိုယ့်ဘက်က ကောင်းပြီး စကီလေးကို ဖီးလ်လို့ကောင်းအောင် မလုပ်ပေးနိုင်ရင်လဲ သိက္ခာကျမယ်ဆိုတော့ ကျော်ကြီးဂျိန်းတိုင်း သုံးနေကြ MOJO Ultra Dotted ကွန်ဒုံးနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးမယ်ဗျာ… ဒီကွန်ဒုံးမျက်နှာပြင်မှာက နှစ်ဆပိုကြီးတဲ့ အဖုတွေပါတဲ့အတွက် ကျော်ကြီး ချစ်တိုင်း သူလေးဖီးလ်လို့ရတော့ တမ်းတမ်းစွဲပဲဗျာ! ဒီတော့ ဘော်ဒါတို့လဲ စမ်းသုံးကြည့်လို့ရအောင် ကျော်ကြီး လက်တို့လိုက်မယ်နော်…